Ultra Matte Liquid Lipstick - 08 Touch Me
"Touch Me" Ultra Matte Liquid Lipstick will let you create the sweetest kisses. The colour of the lipstick will make your lips smooth and soft. It is appropriate for women of all ages. Be strong and i..
Eyebrow Auto Pencil Authentic Brown 001
SAI Eyebrow Auto Pencil ကို အရောင် (၂)မျိုးနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့် Eyebrow Colour ကိုရွေးချယ်ပြီးပြင်ဆင်နိုင်ပြီလေ။နောက်ပြီးသူတို့လေးတွေကလည်း မျက်ခုံးအလှကို Precise Sharping အသေး..
Eyebrow Auto Pencil Greyish Brown 002
Eyeliner 3.0 Jetblack
အခု Version အသစ်နဲ့ထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့ SAI Eyeliner 3.0 Jet Black လေးက PRECISION, SHARP ဖြစ်လို့ အသေးစိတ်တိတိကျကျပုံဖော်နိုင်တဲ့အပြင် QUICK DRY, EASY APPLICATION ဖြစ်လို့ Eyeliner ပြင်ချိန်အတွက် အချိန်..
Face Mask - Antiaging
အသုံးပြုပုံကတော့ မျက်နှာသစ်ပြီးတဲ့အခါ ဒီ mask လေးကိုကပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ပြီးရင် QR Code လေး scan လုပ်ပြီး စိုင်းစိုင်းရဲ့သီချင်းလေးတွေနားထောင်၊ မိနစ် ၂၀လောက်နေရင် ခွာချလိုက်တာနဲ့တင် အသားအရေလေးပိုမိုလှပလာ..
Face Mask - Pore Reduction
Face Mask - Whitening
Mascara - Love is in The Air
Frenzo Color Sai Mascara - Love Is In The Air provides long-lasting wear and no clumping.When applying on upper lashes, start from the root and wiggle the brush all the way to the tip. To make your ey..
SAI Powder - White
Brushနဲ့သုံးရင်ပိုညီညာစေပါတယ်နော် ဒါမှမဟုတ် SAI Makeup sponge or Powderဘူးမှာပါတဲ့ puff နဲ့သုံးရင်လည်းရပါတယ်။မျက်နှာကို မှုံမှုံညက်ညက်လေးနှင့် သနပ်ခါးလိမ်းထားသလို ဖုံဖုံမှုံမှုံ တစ်နေကုန် နူးညံ့ပေါ့ပါ..
SAI Sexy and Intelligent 02 First Kiss
Intelligence is limitless. It goes well with any shapes and sizes.This long-lasting and lightweight soft matte lip cream glides on to your lips leavingasoft satiny feel. It doesn’t dry out your lips..